မြန်မာ LoL: Wild Rift အသင်းကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ အမေရိကန် Esports အသင်း “Athaim” – Gaming Noodle
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ပထမဆုံး League of Legends Wild Rift Mobile ဂိမ်းပြိုင်ပွဲ မပြီးဆုံးသေးခင်မှာပဲ အပြောင်းအလဲ​တွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအပျော်တမ်း အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ CC.Cyber Ceres (C4) ဆိုတဲ့ Wild Rift အသင်းဟာ Royal Jasmine ပြိုင်ပွဲရှိ အသင်း ၅၀၀ ကျော်အနက် ထိပ်ဆုံး (၈) သင်းအဆင့်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်ပါတယ်။ C4 အသင်းဟာ Royal Jasmine ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ Qualifier (1) မှာ Semi အထိသာရောက်ခဲ့ပေမယ့် Qualifier (2) မှာဆော့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး Playoff အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ Athaim က ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ C4 အသင်းရဲ့ Roster ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
1. Green 🇲🇲
2. Sonic Smith 🇲🇲
3. Captainz 🇲🇲
4. Leon Nicky 🇲🇲
5. LittleSoul 🇲🇲
6. Kayb 🇲🇲
7. Admiral 🇲🇲
8. Insane 🇲🇲
9. Shadowlight (Coach) 🇲🇾
Athaim ဆိုတဲ့ Esports Organization ကတော့ 2019 ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ website အရ Apex Legends အသင်းတစ်သင်းရယ် SimRacing အသင်းတစ်သင်းရယ် ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Athaim ရဲ့ Apex Legends အသင်းကတော့ Australia ကစားသမား (၂) ယောက်နဲ့ Thai ကစားသမား (၁) ယောက် ပါဝင်ကစားနေပြီး ဆုကြေးငွေပေါင်း ဒေါ်လာ (၂၁,၀၀၀) ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း Liquipedia မှ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Athaim မှ မြန်မာအသင်း C4 ကို ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကိုတော့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ “Hein Htet Soe” က သူရဲ့ Facebook မှာ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Athaim မှ အုပ်ချုပ်သူများအနေနဲ့လည်း COVID-19 ကာလနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံလည်း လာဖို့ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကစားသမားများအနေနဲ့ လစာခံစားခွင့် မရသေးပေမယ့် နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာအဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ လစာခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း အသင်း jersey များပေးပို့မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မလေးရှား နည်းပြတစ်ယောက် ခေါ်ယူပေးထားပြီး လာမယ့် Royal Jasmine ပြိုင်ပွဲအတွက် အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်လျှက်ရှိပါတယ်။ Playoff အဆင့်မှာလည်း Athaim နာမည်နဲ့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကနေ ပထမဆုံး လာကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ မြန်မာ Wild Rift အသင်းလို့ မှတ်တမ်းတင်ရမယ့် Athaim ရဲ့ လက်စွမ်းကိုတော့လာမယ် Royal Jasmine အသင်းရဲ့ Playoff အဆင့်မှာ စောင့်ကြည့် အားပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။